Importance of Railways ka Turkey | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraImportance of Railways na Turkey
11 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Maps, Isi akụkọ, Turkey
Gịnị kpatara ụgbọ okporo ígwè
Importance of Railways maka Turkey; Ọ bụ ihe kachasị mkpa na ụzọ njem ọha na eze, nke nwere mkpa na-abawanye n'ihe gbasara usoro njem. Ọ bụ dynamo nke njikọta na mmepe akụ na ụba. Ọ na - enyere aka na mmepe akụ na ụba, nke mmekọrịta ọhaneze na nke ọdịbendị nke ebe ọ na - agabiga. Ọ bụ nke akụ na ụba, na-enyekarị ụgbọ ala ndị ọzọ dị ọnụ ala maka ibu dị elu. Ọ na-eme ka ọtụtụ ndị njem ụgbọ mmiri na-ebufe ya otu oge na ọnụ ahịa ya. N'ụwa taa, ebe achọrọ maka ike ọzọ na-enweta ihe dị mkpa, ọ bụ isi mmalite ya na njirimara nke gburugburu ebe obibi.
Ọ bụ ụzọ ọzọ maka ịgbasa okporo ụzọ na-abawanye na mgbasawanye nke netwọala Train High Speed. Thezọ ígwè, nke jikọtara Europe na Eshia n'ụzọ kachasị mma, na-eme ka ikike anyị dị na njem azụmahịa n'ihi na ọ ga-agafe mba anyị n'ihi ọnọdụ mpaghara ya. Ọ na-emeghe ụzọ maka mmepe nke ngalaba ngwa agha. Ọ na-eme ka ọsọ, ike na ikike nke mmepụta mmepụta ihe site na ime ka ịnweta ebe nchekwa ihe dị.
19, otu n'ime ihe omimi nke nwere nnukwu mmetụta na usoro akụkọ ihe mere eme. Traingbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè, nke ghọrọ azụmahịa na ọkara mbụ nke narị afọ; ọ na agbanwe ma megharia ulo oru, ahia, na omenaala; nka, akwukwo, na nkenke, aburula mpaghara nke metutara ihe obula na ihe obula banyere ndi mmadu.
Ulo oru ndi bidoro njem ha na uzo ugbo ala bu ndi n’etu ndu nke mgbanwe na mmekorita nke ndi mmadu. Na mgbakwunye na mmepe akụ na ụba, itinye ego n'okporo ụzọ ụgbọ elu na-abawanye mkpa ọ dị iji hụ na njikọta na mmepe sayensị, mmekọrịta mmekọrịta na ọdịbendị. Railroads; na-ewebata ndu ohuru n’ime mmezi ọ bụla n’agha. Mmetụta kachasị mma nke ụzọ ụgbọ oloko na nnyefe ọrụ nke ọha emeela ka mmepe nke usoro iji bulie ogo ndụ ndị mmadụ.
Nkà na ụzụ na sayensị emeela ka mba dịkwuo n’otu karịa mgbe ọ bụla. Iji mezuo ijikọ ụwa ọnụ na njikọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọrịta, emebela mkpa iji tinye ụdị njem njem. N'ihi nke a ka aghotara mkpa nke ụzọ ụgbọ ala. Isi ebumnuche nke itinye ego na itinye ego na ụgbọ okporo ígwè, ọkachasị na European Union na Far East mba anaghị akwụsị. Aghọtara n’ime afọ iri atọ gara aga na ọ dị mkpa ịsị na njem ụgbọ ala, nke bụ ọnọdụ akachasị eji eme ihe n’ụwa anaghị enwe mmetụta ọ bụla.
Ozi anyị ahụwo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị ka otu n'ime njikọ kachasị mkpa nke mmegharị mmepe na-adịgide adịgide ma rụsie ọrụ ike iji tụgharịa mpaghara a na-eleghara anya site na 1951 ruo na njedebe nke 2003. Oghere dị omimi dị n'etiti afọ 18-945, ebe ejiri wuru okporo ụzọ kilomita kilomita 1951 maka afọ mana naanị 2004 kilomita, juputara na kalịnda ọrụ ọrụ 16 nke afọ gara aga na ọmụmụ ihe dị oke elu mgbe e jiri ntụpọ 1856-1923, 1923-1950, 1951-2003. ọ nọwo na-.
Wayszọ okporo ụzọ anyị eritewokwa uru site na mgbanwe nke echiche nke nkwalite echiche ziri ezi na nke jikọtara ọnụ maka ụdị ụgbọ njem niile na usoro iwu steeti kachasị mkpa. Egosiputara mkpa nke ụzọ ụgbọ ala ahụ dị na atụmatụ itinye ego iji ruo ebumnuche ebumnuche ha ma na-enye ohere itinye ego maka itinye ego n'ọtụtụ afọ site na afọ. Ilzọ ụgbọ elu, n'ime mpaghara nke Republic nke ebumnuche 2023
100. na-akwado ịhapụ akara ya na sistemụ njem.
●● Mmejuputa atumatu elu-ọsọ, ọsọ ọsọ na nke a na-arụkarị n'okporo ụzọ ụgbọ elu,
●● Imeziwanye okporo ụzọ dị ugbu a, ụgbọ elu ụgbọ ala, ọdụ ụgbọ na ọdụ ụgbọ ala,
●● Njikọ nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè na mpaghara mmepụta na ọdụ ụgbọ mmiri,
Mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu dị elu nke mpaghara ya na ndị nwere onwe ya,
Na-eme ka obodo anyị bụrụ ebe mgbakwasị ụkwụ dị mkpa dị na mpaghara a, ọkachasị ebe a na-atụ anya ngwa agha ga-enye nnukwu ohere na mbupụ,
Ọdọ Iron silk ọgbara ọhụrụ, nke ga-esite na Oke Eshia rue Ọdịda Anyanwụ Europe, e guzobere okporo ụzọ okporo ụzọ na-aga n'ihu n'etiti kọntinent abụọ ahụ,
●● Site na ulo oru ohuru ohuru nke ugbo ala a, emeela otutu ulo oru ngo nke oma dika ebum n’uzu nke mmepe ulo oru ugbo ala, otutu ndi na aru oru nke ukwuu.
Turkey elu-ọsọ okporo ígwè oru ngo 40 afọ dream ama. Emechara okporo ụzọ ụgbọ elu Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya na Konya-Eskişehir-Highstanbul ma tinye ha n'ọrụ. 8 n'ime ụwa nwere eriri okporo ụzọ dị elu, 6 na Europe. ebili ka ọnọdụ nke mba ugbu a malitere ọhụrụ oge na Turkey. Uzo elu Ankara-Sivas High Speed ​​Railway di na njedebe nke 2019; Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak nke Ankara-İzmir High Speed ​​Railway line, nke na-arụ ọrụ siri ike ugbu a, ezubere imezu site na 2020, Uşak-Manisa-İzmir na 2021 na Ankara-Bursa akara na 2020.
Site na okporo ụzọ Baku-Tbilisi-Kars na Marmaray / Bosphorus Tube, a na-etinyere okporo ụzọ Iron Silk nke oge a, na ụzọ ụgbọ elu Asia-Western nke Europe ga-arụ ọrụ.
Marmaray 2013, nke eji miri eji abanye ọwara mmiri n'ime ụwa, wuru na Bosphorus, nke bụ nrọ anyị banyere otu narị afọ na ọkara, nke a na-ahụta ka injinia dị omimi nke ụwa ebe a na-eme ka okpukpu abụọ dị elu na-atụle ụzọ ọ ga - esi kwaga n'okporo azụ.
Na mgbakwunye na ngbanwe okporo ụzọ ọhụrụ ahụ, ekwesịrị ka emeziwanye usoro ihe dị ugbua ma malite usoro mgbazigharị okporo ụzọ. Mmezi zuru ezu na mmeghari ohuru nke 10.789 kilomita nke netwok ụzọ ụgbọ oloko dị ugbu a, ọtụtụ n'ime ha emeteghị kemgbe ụbọchị e wuru ya. Ya mere, site na ịba ụba nke ụzọ ụgbọ, ike eriri na ikike, njem ndị njem na nke ụgbọ mmiri bịara bụrụ ntụsara ahụ, dịkwa nchebe na ngwa ngwa ma nwekwuo oke okporo ụzọ na njem.
Enyerela mkpa njikọ njikọta nke ebe a na-emepụta ihe, ngalaba a haziri ahazi na ụzọ ụgbọ oloko na mmepe nke ebu njem ọnụ. Site na ịhazi atụmatụ ọrụ enyemaka maka OIZ, ụlọ ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri nwere ebumnuche ezi uche nke obodo anyị na ịkwado ụfọdụ n'ime ndị a; Egoputala uzo ohuru banyere njem banyere obodo, mpaghara na njem nke uwa.
65. Mmemme Gọọmentị na 10. A na-agba mbọ maka mmejuputa tan Tan site na Transportgbọ njem na Loggbọ Ejikwa Ozu nke agụnyere na Atụmatụ Development. Ihe mmemme a bu n’obi iwelie ntinye aka nke ngwa agha n’etu uto nke ala anyi ma mee ka obodo anyi buru otu n’ime mba mbu nke 15 na Ndepụta Arụmọrụ.
Ewula iwu na-achịkwa okporo ụzọ ụgbọ oloko, etinyere ihe iwu kwadoro na mpaghara ahụ ma mepee ụzọ maka mpaghara onwe iji rụọ ụgbọ njem okporo ụzọ. N'ọnọdụ a, usoro nkewapụ nke ụzọ ụgbọ oloko dịka akụrụngwa na arụmọrụ ụgbọ oloko arụchaala.
N’agbata afọ 2023-2035 n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè
Order Iji kwado ụzọ etiti Trans-Asia nke mba anyị, 1.213 km site na 12.915 km ruo 11.497 km, 11.497 km site na 12.293 km ruo 2023 km imezu uzo uzo 25.208 km n'ogologo na XNUMX, ya mere bulie elu
Tion Mmecha nke usoro ọ bụla,
●● òkè nke ụzọ ụgbọ elu; abawanye na% 10 n'ime onye njem na% 15 na ibu,
Gbaa mbọ hụ na ebumnuche ndị na-ebugharị okporo ụzọ nwere onwe dị mma ma na-adigide,
●● networkbawanye netwọ ụgbọ okporo ígwè anyị na 6.000 km site na iwu 31.000 km mgbakwunye okporo ụzọ dị elu,
Mmepe nke ihe nchebe njem na usoro iji gbochie njikọta nke netwọsị ụzọ ụgbọ ala ya na usoro ndị ọzọ eji ebu njem,
Imecha uzo nile diri uzo ugbo ala na njikọ ya na uzo di adi na ebe ndi di na Gulf ma ghue uzo di uku nke di n’etiti uwa na Europe-Africa.
Ebumnuche ya iru 20% n'ụgbọ njem ụgbọ okporo ígwè yana 15% n'ụgbọ njem.
10. Ebumnuche ngalaba ụzọ ụgbọ oloko na Atụmatụ mmepe bụ:
Na nhazi njem, odi nkpa isetu uzo uzo ugbo ala. A ga-azụlite ngwa eji eme njem na njem ụgbọ mmiri. Ngwurugwu ụgbọ elu na-agba ọsọ, etiti Ankara;
●● Site na okporo ụzọ Istanbul-Eskişehir-Antalya
Istnweta okporo ụzọ dị larịị n'ụzọ dị mkpa dabere na ike okporo ụzọ
ga-enwe okpukpu abụọ.
A ga-eme osigharịrị akara aka na itinye ọkụ na netwọm. A ga-enwetara nnabata na ụkpụrụ ọrụaka na nhazi njikwa iji rụọ ọrụ iji hụ na ebubata ụgbọ okporo ígwè na-akwụsị akwụsị na jikọtara ya na Europe.
Ilgbọ agha na njikọ nke ọdụ ụgbọ mmiri ga-agwụcha. 12 logistics center (9 logistics center mepere maka ọrụ), nke ka na-arụ ma na-akwado ọrụ ọrụ, ga-agwụ.
Na Turkey, na oge mbụ a lọjistik ukwu atụmatụ a na-akwadebe. A ga-akwado iwu ga-adị ndụ ga-adị mkpa ma tinye ya n'ọrụ. Mgbalị ndị na ebumnuche nke Atụmatụ Development na-aga n'ihu n'ike ọsọ
Izmir na Turkey Oge China Relations
Der Spiegel: "Site Turkey na Germany maka Railways ...
Syria, Turkey na Iraq ókè-ala ụgbọ okporo ígwè na ...
Turkey, Railways ọzọ Decision eso na League N'ókèala
DP World Ọkara nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Turkey ...
Oge Kaadị Na-enweghị Aka na Ụgbọ njem
Pasita Kaadị Oge Amalite na Ụgbọ njem
Nyefee oge a na Bursaray na Kent Square Project…
Oge nke usoro atumatu oru na ngwa oru
Oge Akwukwo Akwukwo Osimiri di na Şanlıurfa
Oge TCDD 2018 oge 2. Nkwupụta N'uzo okporo ụzọ e bipụtara
Aytemiz 'ugwo site na ugbo' oge
"İTAKSİ Çağ Oge na Istanbul
netwọk okporo ígwè
nhazi uzo uzo
usoro okporo ụzọ
Uzo okporo ụzọ
Gịnị kpatara ụgbọ
ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị elu
netwọk ụgbọ oloko elu
Ihe oru ngo Digital Silk Road emepere ohuru ohuru nke mmekorita ya na China